The Playhouse Test Drive Auditions for 2015 - The Playhouse Company
The Playhouse Test Drive Auditions for 2015
The Playhouse Company will hold auditions on 10 and 11 December 2014 for participants who wish to participate in its Test Driving the Arts programme during 2015. Auditions Registration will be open from Monday, 17 November – Friday, 05 December 2014.
To take part in the Test Drive auditions, which will be held at The Playhouse, contact Khulekani Kunene on 031 369 9440 between 09H00 and 16H30 only, before cut-off date Friday, 05 December 2014.
Playhouse Company izokwenza inhlolo khono yabazongena ohlelweni lwayo olubizwa nge Test Driving the Arts.
i-Playhouse Company izoba nenhlolo khono ngomhlaka 10 no 11 December 2014 yalabo abafisa ukuba yingxenye yohlelo olubizwa nge Test Driving the Arts ngo 2015 – 2016. Ukubhalisela inhlolo khono kuqala ngo Msombuluko mhlaka 17 November2014 – kuze kuvalwe ngomhlaka 05 December 2014.
Inhloso yohlelo lwase Playhouse Company olubizwa nge Test Driving the Arts lwenzelwe ukuveza ikhono lamaciko akithi evixiyela ngokomdabu nangezinye izinhlobo zokucikoza ezijwayelekile. Izinhlobo zobuciko ezijwayele ukuba khona ungabala o Maskandi, Gospel Music, Kwaito, Afro Reggae, Amapansula, Imfene, Hip Hop, Indlamu, nezinye izinhlobo njalo njalo.
Uhlelo lwe Test Driving the Arts lunika abasebenzi kanye nabavakashi abasenkabeni ye Theku ithuba lokujabulela isidlo sasemini bebe bezitika ngobumnandi bomculo nomdanso kwamahhala eduze kwezindawo zabo zokusebenzela.
Loluhlelo luphinde lunikeze ithuba labo abafisa ukukhula kwezobuciko noma ukuthuthukela phambili kwezobuciko babonwe ngabanye abafuna abanamakhono bezinye izikhungo.
Ngemininigwane mayelana nalenhlolo khono ungashayela e Playhouse ukhulume no Khulekani Kunene kule nombolo 031 369 9440 phakathi kuka 09:00 ekuseni no 16:00 ntambama, ngaphambi kosuku lokuvala lwango Lwesihlanu mhlaka 5 December 2014.